Photopea: imwe nzira ye Photoshop yaunogona kushandisa kubva pane yaunofarira browser | Kubva kuLinux
Photopea: imwe nzira ye Photoshop yaunogona kushandisa kubva kune yako yaunofarira browser
Kunyangwe paine dzimwe nzira dzakanaka kune Adobe Photoshop yeGNU / Linux, senge iyo inonakidza GIMP, vamwe vakamboshandiswa Photoshop vanogona kunge vasina kunyatsogadzikana nechero graphical interface. Zvese zviri kujaira kwazviri, asi kana iwe uchida chimwe chinhu chakafanana kana usingashandise rudzi urwu rwechirongwa kazhinji, ungangodaro usingade kuve nepakeji yakaiswa nguva dzose pane yako system inotora nzvimbo.
Pakadai, nhasi ndinokuratidza Tora imwe inonakidza online imwe nzira ku Photoshop. Sezvo iwe uchigona kuishandisa kubva kune yako yaunofarira web browser, unogona kuishandisa zvisinei nemhando yepuratifomu yauri kushandisa, nekudaro, inoshandawo paLinux. Kana iwe uchifananidza nzvimbo dzekudyidzana dzeAdobe chirongwa uye iyi imwe nzira yepamhepo, kufanana kwakanyanya kwazvo. Zvakare, maficha ePhotopea uye kugona kwavo kunovimbisa zvikuru.
Kana iwe uchinetseka nezve iyo Photopea kuenderanaSezvauri kuona, inoenderana nehuzhinji hwemafomati, senge .jpg, .png, .svg, .psd (native to Photoshop), RAW, and even .sketch. Naizvozvo, haufanire kunge uine dambudziko rekushanda neese mafomati uye mamwezve. Uye zvakare, iwe unogona zvakare kuve nayo muchiSpanish, iwe unongofanirwa kuenda kumenyu uko inoti More> Mitauro> Spanish.
Pakati pe zvakanakira nekuipira kwe Photopea une:
Izvo hazvidi iyo inoshanda sisitimu kana yakakosha Hardware. Inoshanda kubva kubhurawuza nemakomputa ese.
Inowanikwa chero chinhu chipi zvacho chine Indaneti. Zvakare nhare.
Unogona kushanda nePSD uye Sketch.
Iyo yemahara zvachose (ine rutsigiro).
Unogona kuwana zvimwe zvisingakwanisike kune vashandisi vemberi kana vehunyanzvi.
RAW rutsigiro runogona kuvandudzwa.
Iwe unogona kumhanyira mune zvimwe zviitiko zvekuita kana uchishanda nemafaira makuru
Asi yeuka, kana iwe uchida kushanda isingaite, une GIMP, Instagram, choko, Darktable, uye nezvimwe zvakawanda zvakanaka kwazvo zvemahara uye zvakavhurwa sosi mapurojekiti. Kune dzimwe nzira! Kwete kushandisa GNU / Linux yekutenda kuti hapana dzimwe nzira ndiyo isinganzwisisike chikonzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » Photopea: imwe nzira ye Photoshop yaunogona kushandisa kubva kune yako yaunofarira browser
Icho chinhu chakafanana nezvaunoita https://pixlr.com/editor/
john wayne akadaro
girobhu rinonakidza kwazvo. Ndatenda zvikuru nekugovana ruzivo rwakakosha iwe rwaunogona kushandisa zvakachengeteka mune rako basa. ndinofara kugovana izvi neshamwari dzangu nevandinoshanda navo
Ndinodawo kugovera blog yangu pa Photoshop. Ndine chokwadi chekuti zvichafadza kwazvo kwauri.
CCleaner yeLinux? Yechii? Iyi ndiyo dzimwe nzira
IPFS: Yepamberi File System ine P2P uye Blockchain Technology